မှားယွင်းသောအရေခြုံသူများအတွက် 47 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူအများအပြားရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေထိုင်ပြီးကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်သည်ဘဝတွင်မှားယွင်းသော၊ အရေခြုံဟန်ဆောင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်။ ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုးသားမှုမရှိတဲ့သူတွေကိုစိတ်မဆိုးဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာစဉ်းစားပြီးမင်းကိုနာကျင်ဖို့ဂရုမစိုက်တဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူတွေ ...
ဤလူအမျိုးအစားများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောလူသားများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၎င်းတို့ကိုမည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုသင်၏ဘ ၀ မှဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်လျှင်သင်၏အာရုံစိုက်မှု၊ သင်၏အချိန်၊ မမှန်သောနှင့်အရေခြုံသူများသည်များသောအားဖြင့်မနာလိုဖြစ်ပြီးသစ္စာမဲ့ကြသည်။ သင်၏ဘဝတွင်သင်သည်ဤလူများကိုရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်သည်၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးသူတို့၏အပြုအမူများကြောင့်ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဲဒီနောက်သင်ဒီလူတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်သိစေရန်စာပိုဒ်တိုများဆက်တိုက်ပေးသွားပါမည်။ သင်ဤစကားစုများကိုသုံးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤနည်းဖြင့်မည်သူမဆိုသဲလွန်စကိုယူပြီးသင်၏ထက်သူတို့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာထက်မြက်ပြီးပိုမိုခိုင်မာကြောင်းသင်သိနိုင်သည်။.
ရယ်မောပါ၊ မုန်းပါ၊ ငါ့ကိုမုန်းပါ။ နောက်ဆုံးတော့၊ မင်းကငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေချင်တာကိုမုန်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ -အမည်မသိ
အကယ်၍ သင်သည်မှားယွင်းသောသူတစ် ဦး အားသင်၏ဘဝမှနှင်ထုတ်လိုပါကဤအကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာပါ။ သင့်ထံမှသူမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါ။ -Marta Gargoles
လျှာသည်ထက်သောဓားနှင့်တူ၏၊ သွေးမသွင်းဘဲသေစေသည်။ - ဗုဒ္ဓ
အမြဲတမ်းမျက်စိတစ်ပွင့်နှင့်အိပ်ပါ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါနဲ့။ သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများသည်သင်၏ရန်သူများဖြစ်နိုင်သည်။ -Sara Shepard
သင်အတွင်းပိုင်းတွင်အလွန်ရုပ်ဆိုးနေသည့်အချိန်တွင်အပြင်ပန်း၌လှပနေခြင်း၏အမှတ်ကဘာလဲ။ -Jess C. Scott
ကျွန်ုပ်သည်မိမိ၏မစုံလင်မှုကိုဖော်ထုတ်သူများထက်သူတို့၏မစုံလင်မှုကိုဖော်ထုတ်သူများနှင့်ဝိုင်းရံခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်။ -Charles အက်ဖ်ဂလက်စမန်း
သင်နေထိုင်ရန် (သို့) ခံစားရန်မလိုသည့်အရာကိုဝေဖန်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ -အမည်မသိ
တချိန်တည်းမှာပင်“ မင်းကိုငါချစ်တယ်” လို့ပြောတဲ့သူက“ မင်းနဲ့ထာဝရအတူ” လို့ပြောခဲ့တယ်
ငါ့ကိုကောင်းကောင်းမကုသဘဲနေလို့မရဘူးဆိုရင်ငါနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေဖို့သင်ယူရမယ်။ -Frida Kahlo
ငါအတုကလူနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ mannequins ဖြစ်သကဲ့သို့ချစ်ကြတယ်။ -Pushpa ဖား
ဘဝ၌အကြီးမားဆုံးနောင်တတစ်ခုမှာသင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများကိုသင်ဖြစ်စေလိုသည့်အရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ -Shannon L. Alder
ထောပတ်အတုကိုစားရန်သို့မဟုတ်လူများအတုနှင့်ဆက်ဆံရန်ဘ ၀ သည်တိုလွန်းသည်။ -Karen Salmansohn
ငါတို့ကြောက်စရာတစ်ခုတည်းသောဝံပုလွေများသည်လူ့အသားအရေကိုဝတ်ဆင်သူများဖြစ်သည်။ -George RR မာတင်
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်အရေခြုံမှုကိုအမြဲရှောင်ရှားသည်။ -Sam Veda
လူတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဂရုစိုက်ဖို့မျက်နှာဖုံးအတုတွေဝတ်ထားတယ်။ -Muhammad Saqib
စစ်မှန်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့အသီးအပွင့်တွေ၊ နှိမ့်ချမှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လောကဆန္ဒတွေကဘယ်လောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့ကျွန်မသင်ယူခဲ့တယ်။ -Santosh Avvannavar
ကျွန်ုပ်တို့သည်များပြားလှသည့်ကိရိယာများမှတဆင့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်သောအချိန်များများလေစစ်မှန်သောကမ္ဘာတွင်စစ်မှန်သောခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ရန်အချိန်နည်းလေလေဖြစ်သည်။ Morritt -Alex
မင်းဟာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအမြဲတမ်းလိုဟန်ဆောင်နေတာကိုး၊ ဒါကအရေခြုံပါလိမ့်မယ်။ -Oscar Wilde
ငါတို့အားလုံးနီးပါးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအနည်းငယ်သောသူများသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို ဦး တည်စေသောအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များကိုရရှိရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ -Aldous Huxley
နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ရေ၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်နဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ရန်သူတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။ - ဂျူးစကားပုံ
လူအချို့သည်အလွန်မှားယွင်းသောကြောင့်သူတို့ပြောသောအရာများနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟုသူတို့မထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ -Marcel Aymé
ယေဘုယျအားဖြင့်လူတစ်ယောက်မှာလုပ်စရာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ကောင်းသောအသံနှင့်တ ဦး တည်းအစစ်အမှန်အရာဖြစ်၏။ -J ။ Pierpoint မော်ဂန်
ငိုကြွေးနေတဲ့ဝံပုလွေလိုပဲမင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ရှာနေမယ်ဆိုရင်တစ်နေ့ကျရင်မင်းတကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ယောက်တည်းကျန်တော့မှာပါ။ -Criss Jami
ကိုယ့်ကိုသတိရလား? ငါ့ကိုရှာ၊ ငါ့ကိုချစ်သလား ငါ့ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထွက်ခွာခဲ့တာလား။ -အမည်မသိ
သူတို့သည်သင့်ထံမှစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်တောင်းဆိုသော်လည်းအမှန်တရားကိုပြောပြပါကသူတို့စိတ်ဆိုးကြသည်။ ဒီတော့ငါဘာလုပ်ရမလဲ - ငါမင်းကိုရိုးသားမှုမရှိလို့ပြစ်မှားလား၊ -အမည်မသိ
ငါတို့လိုဂူဂဲလ်လိုလူတွေရှိတယ်၊ သူတို့မှာတစ်ခုခုလိုတဲ့အခါငါတို့သာရှာကြတယ်။ -အမည်မသိ
“ ငါ့အပေါ်မှာယုံကွည်ခြင်း” ဟူသည်များစွာသောသူတို့ပြောဆိုသောအရေးကြီးစကားများဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်အားဖြင့်ပြည့်စုံသည်။ -အမည်မသိ
ပထမဆုံးနေ့၌ "ငါမင်းကိုချစ်တယ်" လို့ပြောတဲ့လူမိုက်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကိုယုံကြည်တဲ့သူ။ -အမည်မသိ
ငါ့ကိုမင်းလိုချင်တဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါ၊ စုစုပေါင်း၊ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကမင်းဖြစ်တယ်၊ -အမည်မသိ
အယောင်ဆောင်သူများသည်အတင်းအဖျင်းစကားပြောကြသည်၊ မနာလိုမှုဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဖျက်ဆီးပစ်ပြီးသူငယ်ချင်းများမရှိဘဲသေဆုံးကြသည်။ -အမည်မသိ
လူအများစုကမင်းကိုနားမထောင်ကြဘူး၊ သူတို့ပြောတာတွေကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေကြတယ်။ -အမည်မသိ
သင်ကဲ့သို့သောတံခါးပိတ်စိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မကောင်းသောအရာမှာ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းသူတို့၏နှုတ်များကိုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ -အမည်မသိ
ငါဘယ်သူ့ကိုမှမုန်းတယ်၊ ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာမင်းလိုလူတွေရှိတာငါ့ကိုနှောင့်ယှက်တာပဲ
မည်သည့်စကားလုံး၊ မည်သည့်အပြုံး၊ မည်သည့်အနမ်းနှင့်မည်သည့်ပွေ့ဖက်ခြင်းကိုမယုံကြည်ပါနှင့်။ လူတွေကအရမ်းဟန်ဆောင်ပုံကိုသိတယ်။ -အမည်မသိ
တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘ ၀ တွင်ပထမဆုံးဖြစ်ခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ခြင်း ... အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ -အမည်မသိ
သူကကျွန်တော့်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားပြောနေတယ်။ ငါ့ကိုဝတ်မပြု၊ -အမည်မသိ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » 47 မှားယွင်းသောအရေခြုံသူများအတွက်စကားစုများ
Eduardo ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းတဲ့စာပိုဒ်တိုများ၊ သူတို့ဟာအမှန်တရားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှို့ဝှက်ချက်များပြည့်နှက်နေသောကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုလိုလားသူများရှိနေသေးသည်။
Eduardo Silva C. ကိုပြန်ပြောပါ